CADAADO ////TFG IS IN CADAADO TONIGHT - SomaliNet Forums
Postby COSTA » Mon Dec 25, 2006 2:28 pm
Cadaado :Wada hadal ku aadan sidii loo wareejin lahaa hubka iyo ciidamada ku jira deegaanka Cadaado uu u socda odoyaasha Cadaado iyo saraakiisha ciidamada isbahaysiga difaaca gobolka Mudug.
Isniin, December 25, 2006
Cadaado (AllPuntland)- Duleedka degmada Cadaado ayaa waxaa ka soconaya wada hadallo ku aadan qaabkii loo soo wareejin lahaa hub aad u fara badan oo ay lahaayeen maxkamadaha magaalada Muqdsiho iyo ciidamadii maxkamadaha ka joogay deegaankaasi.
Sarkiisha ugu sar saraysa ciidamada isbahaysiga difaaca gobolka Mudug iyo odoyaasha degmada Cadaado ayaa waxa ay kula ku leeyihin duleedka degmada.
Odoyaasha ayaa waxa ay balan qaadeen in ay soo wareejinayaan ciidamada iyo hubka ku jira magaalada gudaheeda taas badalkeedana ay u baahan yihin in ay helaan balan qaad ku aadan sidii loo nabad galin lahaa dadkaasi.
Taliyaha ciidamada daraawiishta ee DGPL C/laahi Cali Mire (Carays) oo ku sugan degmada cadaado ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay doonayaan in ay soo afjaraan dhibaatooyinka ay wadaan kooxaha malayshiyooyinka ah ee taageersan maxkamadaha magaalada Muqdisho.
Waxa uu taliyuhu sheegay in aysan jirin wax dagaal ah oo ay kala kulmeen inta u dhaxaysa Cadaado iyo Galinsoor, marka laga reebo kooxo dhalinyaro ah oo aan sidaa u fara badnay oo sida uu sheegay ka soo cararay dagaaladii bandiiradleey.
Mudane Carays ayaa waxa uu cadeeyay in ciidamada ugu badan ee maxkamadaha u dagaalamayaa ay yihiin dad dhalinyaro ah oo aad u yar yar.
Col. C/laahi Cali Mire (Carays) ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan ciidamo aad u fara badan oo iyaga oo aan dagaalamin isa soo dhiibay, ayna u la dhaqmeen si wanaagsan, hadana ay ku hayaan meel xafidan.
Isku soo wada duuboo waxaa la filayaa in ciidamdu ay horay u sii socdaan.
Postby AbdiWahab252 » Mon Dec 25, 2006 3:07 pm
Costa, check out the CALCAALKA Rer Cadaado
Ciidanka Maxaakiimta oo xeel dagaal uga baxay Deg/ Cadaado
Submitted by calicad on Mon, 2006-12-25 17:44.
Wararkii ugu danbeeyey ee Deg/Cadaado iyo ciidanka maxaakiimta oo xeel dagaal uga baxay.
Kadib markii ciidanka Mujaahidiinta golaha maxaakiimtu ay ku dhawaadeen in ay gacanta ku dhigaan magaalada Baydhabo ayaa ciidanka kufaarta iyo dabadhilifyada la shaqaystaa goÂ’aan ku gaareen in ciidanka cadowga Amxaaradu qaado dagaal ballaan oo ku wajahan gobolada dhexe si culeyska looga qaado magaalada baydhabo.
Kadib markii ay ciiddanka cadowga Tikreega oo uu horkacayo calooshiis u shaqayste Cabdi Qaybdiid ay ku soo dhawaadeen degaanka Galiinsoor ayaa Mujaahidiintii difaacayey degaanka Cadaado waxay iskugu yimaadeen shir deg deg ah waxayna goÂ’aansadeen in magaalada dhexdheeda aan lagu dagaalamin ayna ka baxaan inta aan ciidanka xabashidu soo gaarin.
Ciidamada maxaakiimtu waxay hadda ku sugan yihiin meel aan ka fogayn magaalada Cadaado oo dhinaca Dhuusamareeb uga beegan waxayna goÂ’aanka bixitaanka u qaateen si aan magaalada loogu dhex dagaalin.
Ciidanka Tikreega iyo cabdi qaybdiidna waxay ku sugan yihiin meesha loo yaqaano Balihigis iyo xaruntii taangiyada. Wax dagaal ah oo magaalada ka dhacay ma jiraan waxaana shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in dhawaan Deg./Cadaado laga saari doono cadowga soo galay.
Wararkan waxaan ka helnay ilo lagu kalsoonyahay oo ku sugan aagga cadaado iyo magaalada Muqdishu.
Postby Cilmiile » Mon Dec 25, 2006 3:47 pm
waxayna goÂ’aansadeen in magaalada dhexdheeda aan lagu dagaalamin ayna ka baxaan inta aan ciidanka xabashidu soo gaarin.
Sound decision. There are some smart guys in the maxkamad after all
by STOP! » Fri Mar 30, 2007 12:20 pm » in Europe - UK
by Twisted_Logic » Sat Oct 03, 2009 9:39 am » in General - General Discussions
Sat Oct 03, 2009 5:52 pm
by FarhanYare » Fri Jun 03, 2016 9:03 pm » in Galmudug
War! And on to Cadaado
by MJ360 » Sat Nov 28, 2015 2:37 pm » in Politics - General Discussions
Fri Mar 30, 2007 12:32 pm
Cadaado in 2008
by Somali_Boqor » Sat Oct 16, 2010 6:45 pm » in General - General Discussions
Cadaado has fallen
by Ashlee~ » Mon Dec 25, 2006 7:10 pm » in General - General Discussions
WAR DEG DEG: AWEYS IN CADAADO!!!!
by AhlulbaytSoldier » Wed Jun 26, 2013 4:00 am » in Politics - General Discussions